Akụkọ - Nkọwapụta nke Mmanya Label Machine na Fineco
Donguan Fineco Automation Technology Co., Ltdnke nwere ike imepụta akwa Wine Bottle Labeling Machine bụ onye ama ama maka aha China "High and New Technology Enterprise" na 2017 ma anyị enwetakwa asambodo ISO90001 na CE. Anyị Wine Bottle Labeling Machines bụ otú ewu ewu na anyị exported America, France, Australia, German na 20 mba ndị ọzọ na mpaghara.
Ọ bụ ezie na anyị nọ n'elu ọrụ a, mana anyị anaghị akwụsị ịchụso nyocha, mmepe na ihe ọhụrụ ka ọ ka mma. Anyị na-agbasi mbọ ike imeziwanye igwe Mmanya Mmanya Mmanya Anyị, wee webata teknụzụ sitere na German, Japanese, Italian na mba ndị ọzọ iji zụlite. Taa, anyị ga-achọ ịkọrọ gị nkọwa ụfọdụ nke Mmanu kalama Label Machines gị.
1. Akụkụ Ngwa
Anyị Wine Bottle Labeling Machines are manufactured with a wide wide according to the different requirements of the customers, ha nwere ike ime otu Lab wrapping gburugburu labeling, abụọ kpọọ n'ihu na azụ n'akụkụ labeling tinyere Orien labeling Ngwa Mmanya Mmanya Mmanya Anyị dị mma maka ụdị cylindrical dị iche iche, ihe nkedo akwara.
Ngwaọrụ nke Mmanya Na-ahụ maka Mmanya Mịnye gụnyere: Ọdụdọ eletriki, vegbazi usoro, Ngwa karama iche, Pịa karama ngwaọrụ, Mpempe akwụkwọ mpịakọta, Ngwa ahịhịa ahịhịa, injin nyocha, sistemụ arụmọrụ na njikwa yana wdg.
3. Uru nke Ngwaọrụ
1. Control System: Japanese Panasonic akara usoro, na elu kwụsie ike na nnọọ ala ọdịda ọnụego.
2. Operation System: Agba ihuenyo mmetụ, ozugbo visual interface mfe ọrụ. Chinese na Bekee enwere. Mfe ịgbanwe niile eletriki oke na nwere agụta ọrụ, nke na-enye aka maka mmepụta management.
3. Nchọpụta Nchọpụta: Iji German LEUZE / Italian Datalogic label sensor na Japanese Panasonic ngwaahịa sensor, nke na-eche maka akara na ngwaahịa, si otú a hụ oke ziri ezi na arụmọrụ arụmọrụ. Ukwuu na-azọpụta ọrụ.
4. Oti mkpu: Igwe ga-enye mkpu mgbe nsogbu bilitere, dị ka ịpịpụta akara, akara agbajiri, ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ.
5. Machine Ihe: The igwe na akụkụ ahụ mapụtara niile iji ihe igwe anaghị agba nchara na anodized agadi aluminum alloy, na elu corrosion eguzogide na mgbe nchara.
Nke anyi Mmanya kalama Labeling Machines dị mfe ịrụ ọrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe ọmụma banyere ya, ị nwere ike ịga www.finecolabeler.com